‘सुरक्षा व्यवस्था मजबूत छ’ - BBC News नेपाली
‘सुरक्षा व्यवस्था मजबूत छ’
Image caption प्रधानमन्त्री देउवाले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने पुरा व्यवस्था मिलाइएको बताए
चुनाव अघि बीबीसीले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुसंग लिएको अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग उनकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा हाम्रा सम्वाददाताले कुराकानी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नै सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रसंग चुनावी गठबन्धन गरेपछि चुनौती थपिएको कांग्रेसको प्रचारको मुख्य नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं उक्त जिल्लाबाट फेरि चुनाव जित्न प्रयासरत छन्। उनलाई सबैभन्दा पहिले सम्वाददाता उमीद वागचन्दले देशभर चुनावी प्रचार तथा उम्मेदवार लक्षित हिंसा र विस्फोटका घटना भएका छन्। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान समेत गइसक्यो। यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको चुनाव शान्तिपूर्ण हुन्छ त? भनेर सोधेका थिए
चुनाव बिथोल्ने तत्व ठाउँ-ठाउँमा हत्या हिँसा गर्न उत्रिएका छन्। तथापि नेपालको सुरक्षा स्थिति मजबुत छ। सुरक्षा निकायहरुले मतदाताहरुलाई निर्धक्क भएर मतदान गर्ने पुरा व्यवस्था मिलाएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले बहुमत ल्याउने भनिरहेको छ। नेपाली काँग्रेसको अवस्था कस्तो छ?
नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याउँछ। कसैले दावी गर्दैमा हुनेवाला छैन। काँग्रेसकै बहुमत आउँछ।
पहाडमा वाम गठबन्धन र तराईमा जहाँ काँग्रेसको बलियो जनाधार रहेको मानिन्छ त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गठबन्धन गरेपछि काँग्रेसको सिट कति आउला?
पहाडमा पनि काँग्रेसको बहुमत आउँछ र तराईमा त झन हामी कुनै पनि हालतमा बढी ल्याउँछौं। यसपाली पहाडमा झन् राम्रो हुन्छ।
कतिपयले त तराईमा काँग्रेस अब फोरम र राजपाको हाराहारीमा खुम्चिन्छ भन्छन् नि?
झुटा कुरा हो। काँग्रेसले बहुमत ल्याएरै छोड्छ। काँग्रेसप्रति जनताको लहर आइसकेको छ।
यहाँकै भनाइ मान्ने हो भने यदि काँग्रेसले बहुमत ल्यायो भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ ?
हुन त एक सय एक छन् नेपाली काँग्रेसमा प्रधानमन्त्री हुने। मेरो संभावना बढी छ।
थाहा नभएको कुरा कसरी भन्ने। तर एउटा कुरा प्रचण्डजी हामीसंग हुनुहुन्थ्यो, अचानक उहाँ उता जानुभएको चाहिँ हो
तपाईँको पार्टीको महामन्त्री शशांक कोइरालाले त पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिने आसयको अभिव्यक्ति हामीसँगको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्नुभएको थियो?
भन्दैमा के भयो र? तर तपाईँ हेर्दै जानुहोला मैले चाहेँ भने प्रधानमन्त्री हुने म नै हो।
तपाईँको इच्छा फेरि सभापति हुने छ कि कसैलाई यो पद छोड्नुहुन्छ?
सभापतिको चुनाव आउन अझै धेरै समय बाँकी छ। २/३ वर्ष बाँकी छ। अहिले नै भन्न सक्दिनँ‚ यो पछि निर्णय गर्ने कुरा हो।
चर्चा वाम गठबन्धनकै गरौं‚ कतिपयले वामपन्थी गठबन्धनको निर्माणमा वाह्य शक्तिको भूमिका रहेको चर्चा गर्छन्। तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ?
यो मलाई थाहा नभएको कुरा हो। थाहा नभएको कुरा कसरी भन्ने। तर एउटा कुरा प्रचण्डजी हामीसंग हुनुहुन्थ्यो, अचानक उहाँ उता जानुभएको चाहिँ हो।
भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरीलाई मेयर पदमा जिताउन पार्टी नै होम्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईँ माथि?
त्यो आरोप लाग्या छ। मान्छे चिन्न सकेन शेरबहादुरले भन्नु हुन्छ साथीहरुले।
यो वामपन्थी गठबन्धनले जितेमा अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहनु भएको छ। के हो त्यो वामपन्थी गठबन्धनले ल्याउने भनेको अधिनायकवाद?
कम्युनिष्ट शासनमा अधिनायकवाद त हुन्छ नि, बोल्न देख्न पाइँदैन। संगठन गर्न पाइँदैन, वाक् स्वतन्त्रता हुँदैन‚ लेख्ने स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यहाँ तानाशाह हुने त हो नि। भोलि गएर चुनाव हुँदैन‚ कहाँ जनताको मतले सरकार बन्ने वा परिवर्तन हुने कुरा हुन्छ? कहिँ हुँदैन।
एमाले त्यति लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास गरेको दल, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको भनेर तपाईँ आफैं पनि गर्व गर्नुहुन्छ। अनि अहिले अधिनायकवाद आउँछ भनेर कसरी पत्याउलान् त जनताले?
कम्युनिष्ट शासन आएपछि के हो त? कम्युनिष्टहरु एक भएपछि त कम्युनिष्ट शासन आउने भइहाल्यो नि। कि नाम बदल्नु पर्यो? उनीहरुले यो संविधान बदलेर राष्ट्रपतीय पद्धति ल्याउँछौं भनेका छन्। यो संविधानमा सबैको अधिकार छ‚ मधेशी‚ आदिवासी, जनजाति‚ दलित‚ महिला सबैलाई अधिकार दिएको छ। त्यसलाई खतम पारेर राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने भनेको के हो त?
भनेपछि गठबन्धनबाट प्रजातन्त्र खतरामा पर्छ भन्ने तपाईँको ठहर हो?
कोशिश त्यही हुन्छ नि‚ नभए यस्तो राम्रो संविधानलाई उनीहरुले किन परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्? साम्यवाद ल्याउछौं भनेर उनीहरुले बोलेका पनि छन्। साम्यवादमा कहाँ बोल्न‚ लेख्न पाइन्छ? कहाँ चुनाव हुन्छ?
प्रजातन्त्रलाई खतरा को बाट छ? वामपन्थी दलहरुबाट कि तपाईंको दल काँग्रेसबाटै?
काँग्रेस (दुई हजार) सात साल देखिनै प्रजातन्त्रका लागि लडेको दल हो। राणा शासन हटाउने दल हो। पञ्चायत हटाएर फेरि प्रजातन्त्र ल्याउने र राजा हटाएर संघीय गणतन्त्र ल्याउने त्यो चाहिँ अधिनायकवादी हुन्छ। पार्टीको सिद्धान्त नै लोकतन्त्रवादी हो।
जुन दलको सिद्धान्त नै लोकतन्त्र छ, जो बचपनदेखि लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था सिकेर आएको छ‚ त्यो चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी हुने? जसले साम्यवाद सिकेको छ उसले कम्युनिष्ट भनेको यस्तो हो‚ लेनिनवाद यस्तो हो‚ माओवाद यस्तो भनेर पढेको छ‚ ऊ‌ चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुने?
पार्टी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बारेमा.....
कार्यसम्पादन समिति बनीसकेको छ। छिट्टै यो चुनाव सकेर सबै नियुक्ति गर्छु, सबै भइहाल्छ।
महाधिवेशन सकिएको पनि दुई वर्ष हुन लाग्यो। पार्टीका कैयौं पदहरु खाली छन् भन्ने गुनासो छ‚ कहिले हुन्छ सबै नियुक्ति?
कार्यसम्पादन समिति बनिसकेको छ। पदाधिकारीको सम्बन्धमा चुनाव पछी गर्छु। चुनावभन्दा अगाडी पार्टिमा अलि कचरपचर भएकोले नगरेको हो।
संसदीय बोर्डमा १४ जना हुनु पर्नेमा त्यसो भएको छैन भन्ने गुनासो छ नि?
संसदीय बोर्ड बनेको छैन किनभने चुनाव गर्नपर्छ। अहिलेको बेला चुनाव गरायो भने ध्यान त्यता जान्छ भनेर नगराएको हो।
तपाईँको दलका महामन्त्री शशांक कोइरालाले त समयमा नै नभएर गल्ती भएको भनेका छन् नि?
तपाईँलाई भनि हालें नि‚ १४ जना बनाउन चुनाव गर्नुपर्थ्यो दलभित्र केन्द्रीय समितिमा। चुनावपछि दलभित्र जित हार हुने र आमनिर्वाचन आइसकेकोले अहिले नगरेको हो।
पार्टीका वरिष्ठ नेता र महामन्त्री तथा धेरै मत ल्याएका केन्द्रीय सदस्य हुँदा-हुँदै पनि तपाईँले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी विमलेन्द्र निधिलाई दिनुभयो‚ यो परम्परा विपरीत भयो भन्ने पार्टीभित्रै पनि आवाज उठेको छ नि ?
हाम्रो पार्टीको विधानमा उपसभापतिलाई दिने भन्ने उल्लेख छ। तर म भारत भ्रमणमा जाँदा उहाँ (निधि) लाई दिएको हुँ। खासै केही होइन त्यो। पछि जो उपसभापति जो बन्छ उसले पाउँछ त्यो।
तपाईँहरुले लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नुभएको दल राप्रपा अहिले पनि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छ‚ त्यसबारे पुनर्विचार गर्नेतर्फ केही सोच्नुभएको छ?
छैन, हामी गणतन्त्र ल्याइसकेको दल हो । त्यो हुनसक्ने सम्भावना नै छैन।
तपाईंको पार्टीका महामन्त्रीले त चुनाव सकेपछि हिन्दु राष्ट्रको बारेमा जनमत संग्रहबाट यो विवाद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्छन् नि। जनमत संग्रह हुन्छ त ?
म हिन्दु हुँ‚ हिन्दु नै प्रधानमन्त्री छ यहाँ। हिन्दु धर्म हटाइहालियो‚ अब फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, सम्भावना कम छ।
फर्काउने सम्भावना छैन?
त्यो चाहिँ संविधानमै भनेको छ परम्परागत रुपमा आएको सनातन धर्म भनेर मानेको छ। सनातन धर्म भनेको हिन्दु धर्म त हो नि। संविधान पढ्नोस् न के लेखेको छ?
म हिन्दु हुँ‚ हिन्दु नै प्रधानमन्त्री छ यहाँ। हिन्दु धर्म हटाइहालियो‚ अब फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, सम्भावना कम छ
संविधान लेखनको क्रममा भारत भ्रमणका बेला तपाईँ लगायत केही नेताहरुले सकेसम्म हिन्दु राष्ट्र राख्ने नत्र धर्मनिरपेक्ष हटाउने योजना सुनाउनुभएको भन्ने कतिपय भारतीय नेताहरुले भन्ने गर्थे‚ त्यस्तो के छ?
यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न दुई-तिहाइ चाहिन्छ नि ।
निकै चर्चामा आएको चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको बुढीगण्डकीको ठेक्का किन रद्द भयो भन्ने धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्‚ के भन्नुहुन्छ?
नेपाल आफैले बनाउने भन्ने प्रस्ताव आएपछि नेपाल आफैले बनाउने कुरा राम्रो हो भनेर मैले मानेको हो। हामी नेपालीले बनाइसक्यौं त माथिल्लो तामाकोशी। आफै बनाउने कुरालाई मैले नाइँ भन्ने कुरै भएन नि।
प्रदेश राजधानीको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? कहिले तोकिन्छन् अब?
चुनाव सकिना साथ म अस्थायी राजधानी तोक्छु। प्रदेशसभाले बनाउने भनेकाले मैले स्थायी राजधानी तोक्नै मिल्दैन।
धेरै कुराहरु आएको छ‚ ७ नं. प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । अब माओवादी र एमालेले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भनेका छन्, कसैले डोटीमै हुनुपर्छ भनेका छन्?
म अहिले यहाँ-वहाँ भन्दिनँ, चुनावपछि अस्थायी व्यवस्था गर्ने हो । त्यसपछि प्रदेशसभाले जहाँ भन्छ‚त्यहीँ हुन्छ।
बारम्बार आइरहेको प्रसंग छ नि‚ तपाईं डडेलधुराबाट कैलालीमा सर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँकी श्रीमती आरजुले कैलालीमै घर किनेको भन्ने कुरा छ?
पर्यटक उम्मेद्वार भनेछन् यहाँ उनलाई‚ त्यही भएर घर किन्न खोजेकी हुन्। सबै त बाहिर बाट आउने हो नि‚ कैलाली-कञ्चनपुरमा यहाँका आदिवासी राना (थारु) बाहेक। चौधरीहरु दाङबाट आएका हुन्‚ हामी पहाडबाट आएका हौं। सबै पर्यटक हो त्यसो भए त।
यसबाहेक नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ‚ केही दिनमै मतदान हुँदैछ?
संसारभरि प्रसिद्ध र सबैले विश्वास गर्ने बीबीसी मार्फत् म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिलेको चुनाव अत्यन्तै महत्वको चुनाव हो। यसले नेपाल कता जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने बेला हो। त्यसैले धेरै लडाईँपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्र जहाँ जनताका अधिकारहरु बोल्ने, लेख्‍ने, संगठन गर्ने, सम्पत्तीको अधिकारसहितको मौलिक अधिकार स्थापित भएका छन् र साथसाथै यो संविधानमा समावेशिता पनि छ । महिला‚ दलित आदिवासी‚ जनजाति सबैलाई आरक्षण दिइएको छ। यस्तो अत्यन्तै राम्रो संविधान बनेको छ। नेपाली काँग्रेसले जितेपछि मात्र यो संविधानको संरक्षण हुन्छ। यो संविधान अगाडि बढ्छ र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ। त्यसैले कसैले खोस्न नसक्ने लोकतन्त्र स्थापित गराइदिनुहोला भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछु।